Shiinaha Gelatin 250 Bloom warshad iyo alaableyda | Gelken
Xiamen Gelken wuxuu ku siin karaa gelatin laga bilaabo 80 ubax ilaa 280 ubax
Marka loo eego xoogga Jelly ee gelatin, gelatine waxaa loo qaybin karaa 80 ubax ilaa 280 ubax sida hoos ku xusan:
Gelaitn 80 ubax, waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa ciridka khamriga
Gelaitn 100 ubaxyada, waxaa loo isticmaali karaa macmacaanka Chewable
Gelaitn 120 ubax, waxaa loo isticmaalaa calaalinta miraha
Gelaitn 140 ubax, waxaa loo isticmaali karaa makhaayadaha
Gelaitn 150 ubax, waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa Nougat
Gelaitn 160 ubax, waxaa si weyn loogu isticmaalaa kareemada Jalaatada
Gelaitn 180 ubax, waxaa loo isticmaali karaa Aspics
Gelaitn 200 ubax, waxaa loo isticmaalaa Hams
Gelaitn 220 ubax, waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in Pies
Gelaitn 240 ubax, Waxaa loo isticmaalaa in pateer
Gelaitn 250 ubax, waxaa loo isticmaalaa hilibka qasacadaysan
Gelaitn 260 ubax, waxaa loo isticmaali karaa hilibka la kariyey ee barafaysan
Gelaitn 280 ubax, waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa hilibka lo'da Corned
Muuqaalka sare ee gelatin ku siin kara xiisad iyo dabacsanaan sare.
Xulashada taxaddar ee alaabta ceyriinka ah ee soo-saarka gelatin waa aasaaska Gelken si loo hubiyo badqabka iyo tayada wax soo saarka. Soosaarayaasha Gelken gelatin waxay kaliya u isticmaalaan doofaarro caafimaad leh, lo 'iyo kalluun sida alaabta ceeriin. Waxaan soo saaro si waafaqsan adag heerarka ISO iyo heerarka kale ee tayo sare leh oo la xiriira ammaanka cuntada iyo heerarka GMP. Iyada oo tiknoolajiyaddeeda wax soo saarka sare iyo nidaamka xakamaynta tayada yurubiyanka ah, Gelken waxay ku guuleysatay wax soo saar tayo sare leh
Kaliya alaabada ceyriinka ee la ansixiyay ee isticmaalka aadanaha ayaa loo isticmaali karaa wax soo saarka Jiekang gelatin. Si kale haddii loo dhigo, dadka hilibka iibsadaa waxay ka yimaadaan isla xayawaan caafimaad qaba sida alaabta ceeriin ee loo isticmaalo samaynta gelatin. Sidaa darteed, gelatin la cuni karo wuxuu buuxiyaa shuruudaha xeerarka gelatin ee la cuni karo wuxuuna u hoggaansamayaa xeerarka cuntada.
Gelken wuxuu ku adkeysanayaa isticmaalka xalalka dabiiciga ah, wuxuu ku dadaalayaa kaamil ahaanta dhamaan dhinacyada wuxuuna ku adkeysanayaa maalin kasta si loo xaqiijiyo himiladeena ah "si joogto ah u hagaajinta tayada nolosha".
Waxaan khubaro ku nahay gelatin, collagen iyo peptides collagen. Maaddooyinkan, oo ah kuwo dabiici ah, saafi ah, aan xasaasiyad lahayn oo la kulma heerarka sumadda nadiifka ah, ayaa door muhiim ah ka ciyaara cunno tayo sare leh, nolol caafimaad leh iyo ikhtiraaca farsamada.
Hore: Gelatin 40 Mesh
Xiga: Gelatin Wixii Nacnac Cirridka